ယခုနှစ် ငါးမဖမ်းရ ရာသီကာလအတွင်း ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ ပင်လယ်ပြင် ထွက်ခွာ ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပေးခြင - Yangon Media Group
ယခုနှစ် ငါးမဖမ်းရရာသီကာလအတွင်း ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ ပင်လယ်ပြင် ထွက်ခွာငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပေးခြင်း၊ မပေးခြင်းကို ယခုလကုန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ငါးသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် ငါးမဖမ်းရရာသီအဖြစ် သုံးလသတ်မှတ်ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ပိတ်ထားမည့်သုံးလကို မည်သည့်လများဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှအတည်ပြုသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးထွန်းဝင်းမြင့်က ” Close Season၊ Close Area ပိတ်မယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီး ဒီလထဲထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ဝန်ကြီးအဆင့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာကတည်းက အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ထားပြီး ဇန်နဝါ ရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာ ထုတ် ပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ပိတ်တဲ့ရာသီနဲ့ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပိတ်ရင် ရာခိုင်နှုန်းဘယ် လောက်ရှိတယ်ဆိုတာထုတ်ပြန် ပေးမှာပါ”ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ပြုလုပ်သည့် သား၊ ငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြော သည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ငါးမဖမ်းရရာသီနှင့် ငါးမဖမ်းရ ဧရိယာ(Close Season? Close Area) သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းအတတ်သင်သိပ္ပံ ကျောင်း၌ သက်ဆိုင်ရာရေလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ရလဒ် ၁၆ ချက်ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းရလဒ်များတွင် ငါးဖမ်းရာသီပိတ်သိမ်းချိန်ကာလအတွင်း ကမ်း ဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးထား သည့် ငါးဖမ်းရေယာဉ်စီးရေအနက်မှ အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးနိုင်သည့် ငါးဖမ်းရေယာဉ်စီးရေ၏ ၃ဝ ရာ ခိုင်နှုန်းအား ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပြုပေးသွားရန်ထည့်သွင်းတင်ပြထား ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်နိုင်က ” Close Season? Close Area ဘယ်လမှစမလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ နှစ်လပိုင်းထဲဖြစ် နေပြီ။ သုံးလပိုင်းထဲဆိုရင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေအကုန်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိတ်မှာလား၊ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်တယ်”ဟု ပြောသည်။